Tolagnaro RN13: Nisehoana loza-pifamoivoizana,1 maty 16 naratra mafy
dimanche, 23 septembre 2018 17:07
Fiarakodia iray mpanao fitanterana mampitohy an'ny Fort dauphin/Amboasary Atsimo (RN13) no tratry ny loza-pifamoivoizana. Handeha any Toliara izy ity no tratr'izao loza-pifamoivoizana izao.Iray maty, 16 hafa naratra mafy ary mbola tsaboina any amin'ny hopitaly CHRR Amboanato Fort dauphin amin'izao fotoana izao.
Raha ny nambaran'ny nanatri-maso dia vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ity loza ity. Ilay ranamana mpamily, voalaza fa tsy tompon'ny tenany, tao anatin'ny hamamoana. Izany rehetra izany midika fa mbola baranahiny ny fifamoivoizana aty atsimo.
Nampanantena, saika isan'andro, ny fitondrana fa handraisana fepetra ireo mpamily tsy manaja ny toromarika sy ny lalan'ny fifamoivoizana. Zava-misy, mbola mahazo vahana ny taingim-be, izay miafara amin'ny vonoan'olona mahatsiravina matetika.